Madaxweynaha Somaliland oo Xil u magacaabay Maayar ku-xigeenkii hore ee Hargeysa | Somaliland Post
Home News Madaxweynaha Somaliland oo Xil u magacaabay Maayar ku-xigeenkii hore ee Hargeysa
Hargeysa (SLpost)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Md Muuse Biixi Cabdi, ayaa wareegto uu maanta soo saaray waxa uu ku magacaabay Maayar-ku-xigeenkii hore ee magaalada Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi (Cabdicasiis Cagaweyne).
Madaxweynaha Somaliland waxa uu Cabdicasiis Cagaweyne u magacaabay inuu noqdo Guddoomiye ku-xigeenka Guddiga Qandaraasyada Qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland.
Wareegtada madaxweynaha oo sumaddeedu tahay JSL/XM/WM/222-805/012022, ayaa u qornayd sidan:- “UJEEDDO: MAGACAABID
In Cabdicasiis Maxamed Xaashi Maxamed laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado Guddoomiye Ku-xigeenka Guddida Qandaraasyada Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland.” Sidaas ayuu madaxweynuhu ku yidhi wareegtadiisa.
Cabdicasiis Maxamed Xaashi, ayaa markii u horeysay saaxadda siyaasadda ku soo biiray sannadkii 2012-kii oo uu ku soo baxay doorashadii Goleyaasha deegaanka, xilligaas oo uu noqday maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa, isagoo xilkaas hayay ilaa bishii May 2021-kii oo ahayd wakhtigii la doortay Golaha deegaanka ee xilligan jooga.